‘Mpikatroka’ Nanafika Trano Fivarotan-tena Ao St. Petersburg, Nanery Ireo Vehivavy Handeha Miboridana Any Amin’ny Polisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2016 7:05 GMT
Rehefa tonga tao amin'ny paositry ny polisy ny vondrona, voalaza fa najanon'ireo polisy mpiandry raharaha ny zavatra nataon'ilay vondrona, fa maika hitady akanjo ho an'ireo vehivavy sy hahafantatra ny zava-mitranga izy ireo. Nametraka tatitra ofisialy tamim-pahanginana i Datsik ary nivoaka. Avy eo, niezaka nanao fanafihana hafa tao amin'ny toerana faharoa, tamin'io alina io ihany izy sy ny mpiray tsikombakomba aminy.
Nanontaniana ny antony nahatonga ireo lehilahiny nanery ny babon'izy ireo handeha miboridana eny an-dalambe, nilaza tamim-piesoesoana tamin'ny tranonkalam-baovao Fontaka i Datsik hoe, “Tokony hahafantatra ireo maherifon'ny fireneny ny olona.”
Naka sary ny fanafihan'ny vondrona tao amin'ny trano fivarotan-tena voalohany ny iray tamin'ireo milaza tena fa “mpikatroka” miara-miasa amin'i Datsik, ary avy eo namadika ny lahatsary tao amin'ny fampitam-baovao tia manaitaitra (tabloid) Life.ru ( Lifenews taloha). Namoaka izany lahatsary izany ny News Network (Tambajotram-baovao) (azo idirana eto, tokony ho fantatry ny mpamaky fa manelingelina tanteraka ny sary), natao manjavozavo ny vatan'ireo vehivavy, fa tsy ny tavan'izy ireo. Nisy fotoana tao amin'ny lahatsary, nisy vehivavy miboridana iray niezaka nandositra ireo andian-jiolahin'i Datsik. Notazonin'ny iray tamin'ireo lehilahy tamin'ny tendany sady miankin-drindrina izy, ary nitalaho hoe, “Miangavy, avelao aho. Mba miangavy re.”
Nisarika ny saina manoloana ny fanapahan-kevitry ny Life.ru hampiseho ny endrik'ireo vehivavy i Alexey Kovalev, Rosiana mpanao gazety sady mpamorona ny NoodleRemover.news (izay mitatitra vaovao momba ny fifampiraharahana maloto sy fanalam-baraka ao amin'ny fampahalalam-baovao Rosiana fehezin'i Kremlin), , nanoratra tao amin'ny Facebook izy hoe:
Mpilalao ady totohondry teo aloha sady mpanakanto amin'ny haiady i Viacheslav Datsik. Miantso ny tenany ho “Tarzan Mena,” efa voaheloka ho jiolahim-boto izy, efa nigadra noho ny halatra, tao anatin'ny fikambanan-jiolahy, mpanao vola sandoka, sy ny sisa maro hafa. Manana fomba fijery anti-Semita sy anti-Kristianina tafahoatra i Datsik, miantso ny tenany ho Slavy mpanompo sampy (avy any Eoropa Atsinanana sy Afovoany) izy. Nandritra ny lalao famaranana ady totohondry tamin'ny 2001, voatery nanakana azy tamin'ny fihazonana mafy ny tanany ny mpitsara, rehefa tsy nanaja ny lakolosy, midika fiafaran'ny ady izy. Tamin'ny volana Aogositra 2010, afa-nandositra ny fonja mihitsy aza izy ary niampita sisintany tsy ara-dalàna ho any Norvezy, izay voasambotra ihany izy tatỳ aoriana ary nalefa niverina tany Rosia ihany. Tamin'ny Martsa 2016, vao roa volana monja izay, navotsotra i Datsik.